गर्भ रहेकै छैन ? थाइराईड हुन सक्छ, के थाइराईड भएका महिलाले बच्चा जन्माउन सक्दैनन् त ? यसरी रहन्छ गर्भ - Enepalese.com
गर्भ रहेकै छैन ? थाइराईड हुन सक्छ, के थाइराईड भएका महिलाले बच्चा जन्माउन सक्दैनन् त ? यसरी रहन्छ गर्भ
इनेप्लिज २०७६ वैशाख ३१ गते १०:३९ मा प्रकाशित
सोही हर्मोनलेनै हाम्रो शरिरको अंगको क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्छ । थाइराइडको खास काम भनेको शरीरको गति नियन्त्रण मेटाबोलिजम गर्ने हो । त्यसैले यसलाई शरीरको एक्सिलेटर पनि भन्ने गरिन्छ । तर जब थाइराईड ग्रन्थीको प्रणालीमा बाधा उत्पन्न हुँदा विभिन्न स्वास्थ्य समस्या आउने गर्दछन् । तथ्यांकले लाखौं मानिस थाइराईडले प्रभावित भएको देखाउँछ । धेरैलाई आफूलाई थाइराईड भएको पत्तै पाउँदैनन् ।
थाइराईड भएको बेला गर्ववती हुन सकिन्न भन्छन् नी ? हेर्नुस सुगर र थाइराइडको विषयमा तपाईको कमेण्ट र डाक्टरको उत्तर ! हेर्नुहोस भिडियो